Wararka - Isticmaalka habboon ee waji-furka iyo ilaalinta shaqsiyeed
Maaskaro Fool Flat
Suuxdinta & Neefsashada
Isticmaalka waji qarsoon iyo ilaalinta shaqsiyeed
Xirashada maaskaro waa hab muhiim ah oo looga hortago cudurrada neef-mareenka. Markaad dooranayso waji duubashada, waa inaan aqoonsanno ereyga "caafimaad". Maaskarado kala duwan ayaa loo isticmaalaa meelo kala duwan. Maaskarada caafimaadka ee la tuuri karo ayaa lagula talinayaa in loo isticmaalo meelaha aan camiranayn; Saamaynta ka hortagga ee maaskarada qalliinka caafimaad ayaa ka wanaagsan tan maaskaro caafimaad ee la iska tuuri karo. Waxaa lagugula talinayaa in dadka u adeegaya meelaha caamka ah inay xirtaan markay shaqada ku jiraan; Maaskaro ilaalin caafimaad, oo leh heer ilaalin sare, ayaa lagula talinayaa baarayaasha goobta, sampellinta iyo shaqaalaha baaritaanka. Dadku waxay sidoo kale xiran karaan waji-ka-dhawrid caafimaad oo ku saabsan meelaha dadku ku badan yahay iyo meelaha xiran ee bulshada.
Markay ardaydu bannaanka u baxaan, waxay xiran karaan waji-gashi caafimaad oo la tuuri karo. Haddii dusha maaskaro wasakhaysan tahay ama qoyan tahay, waa inay isla markiiba beddelaan maaskarada. Markaad maareynaysid maaskarada ka dib isticmaal, isku day inaad iska ilaaliso inaad gacmaha ku taabatid gudaha iyo dibedda maaskaro. Ka dib markaad maareyso maaskaro, jeermiska gacanta waa in si taxaddar leh loo sameeyaa.
Maaskarada la isticmaalay waa in lagu tuuraa qashinka dawada ee Yellow. Haddii aysan jirin qashin huruud ah oo loogu talagalay hay'adaha caafimaadka, waxaa lagugula talinayaa in ka dib marka maaskarada laga masaafuriyo aaladda alkolada lagu buufiyo, maaskarada lagu dhex ridayo bac balaastik ah oo xiran oo lagu ridayo qashinka qashinka waxyeelada leh ee xiran.
Gaar ahaan, waa inaan ku xusuusino inaad meelaha ciriiriga ah, meelaha aan hawada lahayn, sida basaska, tareenada dhulka hoostiisa mara, wiishashka, musqulaha dadweynaha, iyo meelaha kale ee cidhiidhiga ah, waa inaad xijaab xirtaa oo aad qabataa shaqo wanaagsan oo ilaalin shaqsiyeed.
Waqtiga boostada: Abriil-23-2021